Bower & Wilkins တို့ P5 ကြိုးမဲ့နားကြပ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
Bower & Wilkins တို့ P5 ကြိုးမဲ့နားကြပ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အဆိုပါ Bower & Wilkins P5 ကြိုးမဲ့အလွန်ကြီးစွာသောအသံ, လျောက်ပတ်သောကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အတိုနားထောင်ခြင်း sessions အတွက်အဆင်ပြေများမှာ. သူတို့ဟာနောက်ဆုံးရှည်လျားလုံလောက်သူတို့ကိုအားသွင်းစိတ်ပူစရာရှိသည်နှင့်နယ်လှည့်အဘို့အတော်လေးကျစ်လစ်သိပ်သည်းမမှ.
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Bower & Wilkins P5 ကြိုးမဲ့နားကြပ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: အဘိုးမှာလာထိပ်တန်းထစ်သံကို” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com သောကြာနေ့ 14 သြဂုတ်လအပေါ်များအတွက် 2015 06.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အဆိုပါ P5 ကြိုးမဲ့ကဗြိတိသျှအသံထုတ်လုပ်သူ Bower များမှာ & မြတ်သောသံကိုဒါပေမဲ့ဝက်ဖုတ် wireless နှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ Wilkins ရဲ့ပထမဦးဆုံး Bluetooth ကိုနားကြပ်.
သူတို့ဟာကုမ္ပဏီရဲ့ကြိုး P5 On-နားကိုနားကြပ်နှင့် Chrome ချောင်းတွေနဲ့အနက်ရောင်သားရေနားကို pads အပါအဝင်ရေး retro ပုံစံနှင့်အတူနီးပါးတူညီကြည့်ရှု.
on-နားကိုဒီဇိုင်းသူတို့သည်သင်၏ဦးခေါင်းကို၏ဘေးထွက်သို့သင်တို့၏စကားကိုနားထောငျ၏တပြင်လုံးကိုနှိပ်အခဲအနားကို pad ပါနှင့်အတူအနားကိုအပေါ်ထက်ကျော်ထိုင်ဆိုလိုသည်. တိုတောင်းသောနားထောင်ခြင်း sessions အတွက်သူတို့အတော်လေးအဆင်ပြေများမှာ - ခေါင်းပေါ်မှာလင်းနှင့်ကိုတင်နေဖို့ - ဒါပေမဲ့သူတို့နား pinch သူတို့နှင့်ချွေးစေးလုပ်အဖြစ်ကြာကြာနားထောငျအစည်းအဝေးများနာကျင်ဖြစ်လာ.
လက်ဝဲနားကိုခွက်ကိုအားသွင်းများအတွက် microUSB ဆိပ်ကမ်းနှင့်တစ်ဦးအာဏာကို slider ကိုရှိပါတယ်, သောစက္ကန့်စုံတွဲတစ်တွဲအဘို့ဆင်းကျင်းပလျှင်တွဲဖက်မှု mode ကိုသို့နားကြပ်တတ်၏. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ P5 ကြိုးမဲ့အသံသည်ထိပ်တန်းထစ်. သူတို့ကတစ်ဦးလျောက်ပတ်သောများ, punchy ပေမယ်ရှိသညျမဘေ့နှင့်ကောင်းမွန်သောအသေးစိတ်နှင့်တူရိယာအကြားခွဲခြာနှင့်အတူ rounded သံကို. သူတို့ကအစဉ်အမြဲငါစကားကိုနားထောငျထားသောအကောင်းဆုံးအသံ On-​​နားကိုနားကြပ်တချို့ရှိနေပါတယ်.
သူတို့၏အသံအထီးကျန်မှုတွေအတော်လေးဒါအထင်ကြီးမဟုတ်ပါဘူး. ambient ဆူညံသံခြီသည်, ဒါပေမဲ့အသံနှင့်ပြတ်သားအသံငါတသမတ်တည်းအကြှနျုပျ၏နေ့စဉ်အသွားအပြန်ထုတ်ရေနစ်ရန် volume အဖွင့်ကိုဖွင့်ခိုင်းခဲ့ဆိုလိုတာကအနားကြပ်ကိုနားထောငျခွက်မှတဆင့်ရှင်းလင်းစွာကွားနိုငျများမှာ.
ဒါကြောင့်ဝေးအရာအားလုံး P5 ၏ကြိုးမူကွဲအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ Bluetooth နဲ့ပြန်ဖွင်ထိန်းချုပ်မှုကြောင့် Bower အတွက်လာသောအခါ & Wilkins စိတ်ပျက်ဖို့စတင်သည်.
အဘယ်သူမျှမ near-field communcation ရှိပါတယ် (NFC ကို) ထိုနားကြပ်သို့ built, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်စမတ်ဖုန်းမှ Bluetooth မှတဆင့်တွဲဖက်ခံရဖို့ရှိသည်. ပြီးတာနဲ့တွဲဖက်သူတို့သည်အလွန်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်, အပေါ်လှည့်ကျသောအခါဒါပေမဲ့သူတို့အလိုအလျှောက်အဖြစ်အားလုံးနီးပါးအခြား Bluetooth ကိုအသံစက်ပစ္စည်းပြုပါပြန်လည်ချိတ်ဆက်မည်မဟုတ်.
ရိုးရှင်းသောနေသောတစ်ဦးမလိုအပ်တဲ့အနည်းငယ်ခြေလှမ်းများဒါပေမဲ့စိတ်ပျက်စရာအစာရှောင်ရ - ဒါကသင်ကိုယ်တိုင်ဖုန်းပေါ်မှာ Bluetooth ကို Setting ထဲကိုတွင်းတူးခြင်းနှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်ရှိသည်ကိုဆိုလိုသည်.
လက်ျာနားခွက်ကိုရက်နေ့တွင်ပြန်ဖွင့်နဲ့ volume ထိန်းချုပ်ခလုတ်အနားကြပ်၏ကျန်နှင့်အတူမကျန်းမမာလျောက်ပတ်များမှာ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါခေတ္တနား, ပြဇာတ်နဲ့ volume ခလုတ်လည်းစျေးပေါခံစားရ, နှင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံလမ်းကြောင်း-Skip ခလုတ်၏မရှိခြင်းစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပါသည်. နှစ်ချက်နှင့်သုံးဆရှေ့သို့ပြန် skip မှကစား button ကိုနှိပ်အမြဲကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး.
ဘက်ထရီသက်တမ်းတော်တော်ကောင်းလှ၏, ပတ်ပတ်လည်တည်တံ့ 16 စမတ်ဖုန်းများနှင့် tablet အမျိုးမျိုးမှငါ့စမ်းသပ်ခြင်း streaming များဂီတအတွက်နာရီ. အားသွင်းအသေးစားကို USB ကနေတစ်ဆင့်နာရီစုံတွဲတစ်တွဲကြာ.
အဆိုပါ P5 ကြိုးမဲ့ကြေးနန်းနှင့်အတူလည်းသုံးနိုင်တယ်, လက်ဝဲနားကိုခွက်ကိုနောက်ကွယ်ကနားကြပ်အတွင်း၌ဖြည့်စွက်ထားတဲ့. အဆိုပါ pad ပါသံလိုက်အားဖြင့်အပေါ်ကျင်းပခဲ့သည်, အတော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်အနေအထား၌ကိုင်သော. ဒါဟာနည်းနည်း fiddly င်, ဒါပေမဲ့တခါ wire ကိုအမြဲရှိသင့်သကဲ့သို့ကြည့်ဖြည့်စွက်.
နားခွက်သံလိုက်အားဖြင့်အရပ်ဌာန၌ကျင်းပကြသည်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Bower & Wilkins P5 ကြိုးမဲ့£ 330 ကုန်ကျ - ကြိုး P5 စီးရီးထက်£ 80 ကပို2£ 250 ကုန်ကျ, ထိုသို့သောမြတ်သောအဖြစ်ကြိုးမဲ့ပြိုင်ဘက်ထက်နှင့်£ 80 ကပို Philips က Fidelio M1BT.
ဒါပေမဲ့သူတို့က Bluetooth နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်အတူလုပ်ဖို့နှောင့်အယှက် niggles များ, £ 330 ကုန်ကျနားကြပ်တရံပေါ်လက်ခံနိုင်ဖွယ်မနေသော. အဆိုပါမော်တော်ကားပြန်လည်ချိတ်ဆက်ကိစ္စရပ်များကိုတစ်ဦးဆော့ဖ်ဝဲကို update ကိုအတူ fixable ဖြစ်စေခြင်းငှါ,, ဒါပေမဲ့ဆက်ကပ်အပ်နှံထား Skip လမ်းကြောင်းခလုတ်သို့မဟုတ် NFC ကို၏မရှိခြင်းပဲနာကျင်ကျိန်းစပ်သည်.
အကောင်းအဆိုး: ကောင်းသောအသေးစိတ်, ဘေ့စနှင့်လာကြတယ်, တာရှည်ခံသော, တိုတောင်းသောကာလအဘို့သက်သာ, ဦးခေါင်းပေါ်တွင်တင်နေဖို့, ကြည့်ကောင်းရှုကောင်း
Cons: ပြန်ဖွင့်ထိန်းချုပ်ခလုတ်ကိုစိတျဆိုးနေကြတယ်, အဘယ်သူမျှမ NFC ကို, အဘယ်သူမျှမကဘလူးတုသ်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်, စျေးကြီး, ဆငျးသကျခေါက်ကြဘူး
• ကေဘယ်ကြိုးတွေအခမဲ့ချိုးဖျက်ဖို့အကောင်းဆုံးကို Bluetooth နားကြပ်ငါးခု
• Zik ကြက်တူရွေး 2.0 ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: Philippe Starck ကဒီဇိုင်းကြိုးမဲ့နားကြပ်
guardian.co.uk © ဂါးဒီးယန်းသတင်း & မီဒီယာလီမိတက် 2010
အပိုဒ်, ဒစ်ဂျစ်တယ်တေးဂီတနှင့်အသံ, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, ရှမွေလသည် Gibbs, နည်းပညာ
← ငါးကိုရေနံအများဆုံးစွန့်စားမှုကနေသူတို့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုတားဆီးနိုင်ကူညီနိုငျ ငါစဉ်းစားတယ်ဘာကိုစဉ်းစားကြသည်? စိတ်ကိုထိန်းချုပ်မြင့်တက် →